Famokarana entana, mpamatsy - Mpanamboatra vokatra any Sina
Ny taratasy fanamarinana anay
Warranty sy fikojakojana
Andiany Hongfu AJ-C no mandray ny motera Cummins. Hongfu AJ-C series dia misy fahamendrehana avo lenta, ny vidin'ny fampiasana dia mora, fiainana miasa lava kokoa, fikojakojana mora foana. Ampiasaina be ao amin'ny toby famokarana herinaratra, tranobe, ozinina, hopitaly ary indostrian'ny harena ankibon'ny tany sns.
Ny andiany Hongfu AJ-DE dia manamboatra ny motera Deutz. Emission standard-EU II, EUIII na andiany mahazatra ho an'ny tsena samihafa. Range 22KVA-625KVA, fampisehoana tonga lafatra amin'ny vokatra tsy tapaka mitohy, fanaraha-maso ny famoahana, vidin'ny fandaniana solika, hovitrovitra sns.
Hongfu dia naka ny motera Perkins ary namoaka setran'ny mpamokatra génie AJ-PE. Ny famolavolana andian-dahatsoratra AJ-PE dia ny hanomezana ny mpampiasa anay. Vahaolana fampiasam-bola / fihenam-bidy ambany.
Ny andiany Hongfu AJ-Y dia mandray ny motera Yanmar izay nohafarana avy any Japon.
Ny andiany Hongfu AJ-KB dia maka ny motera Kubota izay entana avy any Japana.
Hongfu AJ-XC andiany dia manaiky ny motera FAWDE. Hongfu AJ-XC andian-tantara dia miaraka amin'ny avo azo itokisana, ny vidin'ny fampiasana dia mora, fiainana miasa intsony, mora fikojakojana. Ampiasaina be ao amin'ny toby famokarana herinaratra, tranobe, ozinina, hopitaly ary indostrian'ny harena ankibon'ny tany sns.
Hong sery Hongfu AJ-L dia mandray ny motera Lovol izay manana ny endri-javatra firafitra, feo malefaka, fampihenana ny solika ary ny fampisehoana tsara. Ampiasaina betsaka amin'ny sehatry ny serasera, lalamby, tetikasa, indostrian'ny fitrandrahana sns.
Andian-tsarimihetsika Hongfu AJ-WP dia mandray ny motera Weichai. Ny faritra misy ny motera Weichai dia misy marika roa Weichai sy Baudouin. Ny motera marika Weichai dia 23KW ka hatramin'ny 400KW Baudouin marika eninge dia avy amin'ny 406kw ka 2450kw.
Andiany Hongfu AJ-YC dia mandray ny motera YUCHAI izay manana endrika mampiavaka ny firafitra mifangaro, feo ambany, fanjifana solika ambany ary fampisehoana avo lenta. Ampiasaina betsaka amin'ny sehatry ny serasera, lalamby, tetikasa, indostrian'ny fitrandrahana sns.
Hong sery Hongfu AJ-YT dia mandray ny motera YTO izay manana ny endri-javatra fiakarana, fihenan'ny feo, ny fisondrotry ny solika ary ny fampisehoana tsara. Ampiasaina betsaka amin'ny sehatry ny serasera, lalamby, tetikasa, indostrian'ny fitrandrahana sns.
Hongfu AJ-SC andiany dia mandray ny motera SDEC izay manana ny endrik'ilay rafitra fiakarana, ny feo malefaka, ny fisondrotry ny solika ary ny fampiasa tsara. Ampiasaina betsaka amin'ny sehatry ny serasera, lalamby, tetikasa, indostrian'ny fitrandrahana sns.
Hongfu AJ-R series generator set dia manangana an'i Y485BD, N4100, N4105, R6105, R6110 ary 6D10D sns engine novokarin'ny orinasa maotera Ricardo ao amin'ny tanàna Weifang. Ireo maotera dia manana fampisehoana tsara toa ny vidiny mirary, ny fanjifana solika ambany, ny fahamendrehana avo lenta, mora tazonina sns.
Tips - Vokatra mafana - Sitemap
Vidin'ny Generator, Varotra Generator efa niasa, Diesel Generator Miaraka amin'ny motera Kubota, Generaly 240kw, Vidim-pamokarana Diesel, Generator kely,
No.6 Jianye Road Tongxin Economic Development Zone Zhenghe County Nanping City Fujian Faritany China
Araka ny filanao, manamboara ho anao, ary manome anao vokatra sarobidy kokoa